Bertil Lintner | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Posts Tagged ‘Bertil Lintner’
EMG is RESPONSIBLE for the Rohingya Ethnic Cleansing and Anti-Muslim Hate Campaigns
EMG is RESPONSIBLE for the Rohingya Ethnic Cleansing.
Now only EMG boss reliazied his fault BUT never apologize or even mention his guit or mistake.
ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် တစ်နှစ်ကျော် နှစ်နှစ်အကြာမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်စစီ၊ တစ်စစီ ပြိုကွဲလာပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေ ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသလဲ။ ဒီအခြေအနေတွေ ဘယ်အချက်အတွေက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာလဲဆို ကျွန်တော်တို့ ဆန်းစစ်ကြည့်တော့ ဒီဆန်းစစ်ချက်တွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ အချိန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အကြေင်းအရင်းကတော့ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်အယ်ဒီပါတီဟာ ၄၄ နေရာမှာ ၄၃ နေရာ အနိုင်ရရှိပြီး နောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကိုတော့ လူတွေအားလုံး သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။
Tags:Aung San, Aung San Suu Kyi, Bertil Lintner, Burma, Eleven Media Group, Myanmar, Rohingya people, Thein Sein
Source: Is Burma regime inciting Rakhine conflict to discredit Aung San Suu Kyi?
Conflict between Rakhine Buddhists and Rohingya Muslims could force opposition leader to make an unpopular intervention
BY Edward Loxton LAST UPDATED AT 07:49 ON Tue 12 Jun 2012
CHIANG MAI – As sectarian violence continues unabated in Burma’s westernmost state of Arakan, suspicion is growing that the clashes between Buddhists and minority Muslims are part ofagovernment plot to discredit the hugely popular opposition leader Aung San Suu Kyi and weaken the threat she poses to its military-backed power base.
Tags:Aung San, Aung San Suu Kyi, Bertil Lintner, Burma, Kachin Independence Army, Maung Zarni, Muslim Rohingya, Rakhine State
Right before my eyes, I can see humanity reduced to nothingness when both sides of people call for revenge, retribution and killings in the name of justice and righteousness.
Educated and not so educated people are now nothing more than piles of feces in front of computers, with that their so called new found cowardly courage.
I do not condone violence, for whatever reason it is. It’s not our duty to call for others death, life is precious.
Tags:Bertil Lintner, Burma, Burmese Muslim, Islam in Burma, Muslim, Myanmar, Rohingya, Rohingya people
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း ၂ )
Source: မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း ၂ ) from FB of Aung Moe Win
ခုခံချေပချင်သူတွေဘက်မှ ကျောင်းသားတယောက်ကနေ ဖေ့ဘွတ်မှာ မှတ်ချက်တခုပေးထား တာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။…… “ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဒီကိစ္စ ကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ဖို့ လုပ်နေတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းသိင်္ခ ရဲ့ မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော ဝတ္ထုထဲက စကားလို၊ “ အိုင်ပီ အောင်သင်းရေ- ဒီ ကွင်းဆက် က စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးပဲဗျ၊ ဇာတ်လမ်းကတော့ အထွဋ်အထိပ် ကို ရောက်လာပြီဗျို့” လို့ ပြောရမလို ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ လိုချင်တာလည်း “ အဲ့ဒီ တာဝန်ရှိသူတွေဆိုတာ ဘယ်သူလဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ သွေးအေးအေးနဲ့ လူသတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ဘဝမှာ တခါတလေလောက်တော့ ပြန်ပြီး အမဲလိုက်ကြည့်ချင်စိတ်က ပေါ်နေတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းတခုပြောပြမယ်ဗျာ။
Tags:All Burma Students' Democratic Front, Bertil Lintner, Far Eastern Economic Review